SEO backlinks - hividy sa tsia?
Tsy ilaina ny milaza fa ny fanapaha-kevitra hanangana backlinks voajanahary voajanahary sy organic na hividy azy ireo dia tsy misy afa-tsy aminao. Fa andao hiatrika izany - Ny fividianana rakitra ho an'ny tranonkalanareo dia tsy zava-mahagaga fa zavatra tena mahatsiravina. Mazava ho azy, afaka mahazo ny volavolan-dalàna SEO mandoa vola ny olona ary mividy azy ireo mora, ohatra avy amin'ny mpamatsy voalohany hita tao amin'ny Internet. Noho izany, mieritreritra ianao hividy bakolava tsara ho an'ny tranokalanao, sa tsy izany? Ary raha manao izany ianao dia mino aho fa ho tsara kokoa ny fahatsapanao ny zavatra ho hitanao. Na inona na inona, na te-hahazo fandresena haingana momba ny mpiara-belona anao ianao ao SEO raha te hanangana PBN (tambajotra tsy miankina). Angamba ianao hanangana tolo-kevitry ny mpiserasera roa ao amin'ny media sosialy ho ana tanjona fananganana rohy. Na koa mety mbola mandanjalanja ny fiheverana sy ny fiheverana ny fikojakojana ny SEO eo amin'ny sehatra SEO na mividy azy ireo fotsiny - azonao itokisana kokoa amiko, tahaka ny efa hitako. Mieritreritra aho fa angamba ny karama rehetra natao hanatsarana ny SEO ao amin'ny tranonkala dia saiky miteraka vokatra vetivety foana raha tsy mahazo fandrosoana ara-drariny amin'ny asa tena sarotra sy maharitra. Raha ny marina, ny fiezahana mamitaka amin'ny Google dia midika fa tsy maintsy hiatrika ny sazy ianao raha tsy miala na manimba ny doka misy anao. Midika izany ny tafatafa rehefa tapitra ny zava-drehetra ary ny tranonkala iray manontolo dia miala amin'ny endriky fikarohana. Izany no antony raha tsy azonao antoka izay tokony hatao amin'ny backlinks SEO - mividy azy ireo na tsia - eto ny zavatra tokony ho fantatrao, na fohifohy. Raha toa ka mbola mieritreritra momba ny volavolan-dalàna nokaramaina ianao, tadiavo tsara ireto sora-baventy manaraka ireto:
fa ny fividianana rindran-damina dia manohitra ireo toro-làlana webmaster noforonin'ny Google. Izany no zavatra voalohany tokony ho fantatra, ary mino aho fa efa ampy tsara izao ny antony mahatonga anao hanova ny sainao.
mividy (mivarotra) backlinks izay nahomby tamin'ny famerenana ny fanamarinana Pagerank;
fifanakalozana mivantana mivantana, na mahazo hafatra miaraka amin'ny backlinks ho takalon'ny vola, rohy hafa, ary zavatra hafa amin'ny tena ara-barotra;
fifanakalozam-baovao amin'ny ankapobeny, ary ireo hetsika hafa mifandraika amin'ny fihoaram-pefy na fifandonana mahery vaika;
famokarana lahatsoratra na vahiny mamoaka fanararaotana amin'ny ambaratonga, matetika ny rohy tafiditra amin'ny vatofantsika manan-karena;
fampiharana amin'ny fitaovana na programa na serivisy an-tserasera amin'ny tanjona famoronana rohy.
Nalaina tamin'ny ankapobeny, angamba ny ezaka rehetra hanesorana, hanodinkodina na hanararaotra ny motera lehibe (tahaka an'i Google) dia mety handika ny fitsipika fototra amin'ny lalao. Izany no antony mahatonga ny zavatra rehetra voalaza tato ho ato dia tena tsy tiana ary tsy voatery omena, raha tsy te-hijaly noho ny sazy haingana. Mazava ho azy, ireo manam-pahaizana webmasters, tompon-tranonkala, ary na ireo manam-pahaizana SEO aza dia maniry sy vonona ny hitoka-monina amin'ny tetikasany an-tserasera. Saingy misy andalana ambany - vola be dia be no omena vola. Ary na izany na tsy izany, ny fividianana azy ireo ho an'ny tranonkalanao na ny bilaogy dia afaka mitaky mihoatra noho ny vola Source .